Ukuphikiswa Okumnyama 95% 99% 99.5% Ama-Alumina Seal Faces China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > Ukuphikiswa Okumnyama 95% 99% 99.5% Ama-Alumina Seal Faces
Njengoba i-alumina inokugqoka okunamandla kakhulu, ubulukhuni, ukuzigcoba, i-aluminium oxide i-ceramic ihlale ibhekwa njengokukhetha okuhle kobuso be-ceramic ebusweni, ama-valve. Sinikeza iziqu ezihlukahlukene ze-alumina ze-alumina, kuhlanganise nama-alumina angu-95%, 99% i-alumina ne-99.5% i-alumina. Zonke ubuso be-ceramic ubuso esizihlinzekiwe babonisa ukufaka uphawu oluhle, isikhathi eside sempilo yokusebenza, ukuphepha kokusebenza kanye nezindleko zokugcina eziphansi.
Ngekhono lethu lobuchwephesha nobuchwepheshe bezilwane zezicathulo ze-ceramic, sikhiqiza izingxenye eziningi zezingxenye ze-ceramic ngaphandle kobuso be-ceramic seal, njengezicabha ze-ceramic seal, i-valve ye-ceramic ball, izihlalo ze-valve ze-ceramic.
Zonke lezi zimpawu ze-ceramic zinikeza izilinganiso ezicacile kakhulu futhi zikusize uthole inani elifunayo lamanzi, igesi.
Gqoka ugqoke lwe-textile we-ceramic roller
Ama-95% aluminium Oxide Ceramic Seals
I-99.5% ye-Aluminium Oxide Ceramic Seals